बलत्कारको अभियोग लागेका मिथुनका छोराले गरिछाडे विवाह – Medianp
शुक्रबार, १०, फागुन, २०७५
बलत्कारको अभियोग लागेका मिथुनका छोराले गरिछाडे विवाह
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, असार २६, २०७५१७:२३0
एजेन्सी,२६ असार । विवाहको केहि दिन अगाडी बलत्कारको अभियोग लागेका अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीका छोरा महाअक्षयले आफ्नी प्रेमीका मदलसासंग विवाह गरेका छन् ।
यी दुईको बिहे ७ जुलाइमा हुने तय भएको थियो । तर समारोहस्थलमै प्रहरीको टिम जाँचको लागि पुगेपछि बिहे रोकिएको थियो । यी दुईको बिहे कहिले र कहाँ भयो भन्ने जानकारी आइसकेको छैन । यद्यपि फोटोहरु निकै भाइरल भइरहेका छन् । यी दुईले ७ जुलाइमै कोर्ट म्यारिज गरेको र आज परम्परागत बिहे गरेको एक सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
यो विवाहमा समस्या त्यतिबेला सुरु भएको थियो जब एक भोजपुरी हिरोइनले महाअक्षय र उनकी आमा योगितामाथि बलात्कार र जबरजस्ती गर्भपतन गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । दिल्लीको रोहिणी कोर्टले महाअक्षय र योगिताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न भनेको थियो ।
त्यसपछि यी दुईले बाम्बे हाइकोर्टमा अग्रिम जमानतको निवेदन दिएका थिए जुन निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । बिहेअघि महाअक्षयमाथि आरोप लागेपछि उनकी हुनेवाली पत्नी मदलसा र हुनेवाली सासूले महाअक्षयको समर्थन गरेका थिए । उनीहरुले भनेका थिए ‘हरेक व्यक्तिको एउटा विगत हुन्छ । हामीलाई यसबारे थाहा छ । यो बिहे पक्का हुन्छ ।’
विश्वकप फाइनलमा फ्रान्स र इंग्ल्याण्ड पुग्ने बीबीसीको भविष्यवाणी
दुई अर्थ लाग्ने तस्वीरहरु ! बुझ्नको लागि तपाईले ३ पटक सम्म हेर्नु पर्नेछ !
16 ÷ = 16
संसारमाथि विजय हासिल गर्न आत्मासात गर्नुपर्ने १० महान वाणीहरु !
परिक्षामा तनावमुक्त भई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने ४ उपाय !
अशिष्ट व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्दा अपनाउनुपर्ने ४ महत्वपूर्ण उपाय !
रहेनन् ‘विवाह’ र ‘प्रेम रतन धन पायो’ जस्ता हिट फिल्मका प्रोड्युसर राजकुमार
प्रसंग वर्षा संजोग विवाह : संजोगलाई ‘बुढो’ भन्न पाउँदा दंग बर्षा
प्रेम र बिछोड देखाउंदै आयो ‘पुरानो बुलेट’ ट्रेलर (भिडियो)
राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पर्यटन बोर्डमा ६० देशका फिल्म देखाइँदै
आक्रोशित राखी सावन्तले दिइन् मोदीलाई तत्काल कुर्ची छोड्न चेतावनी (भिडीयो)
गायक‘कृष्ण कार्की’को गीतमा पल शाह र आँचल शर्माको डान्स
इक्वेडरमा ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प
प्रतिबद्धता पूरा गर्छु : अध्यक्ष दाहाल
रानीपोखरी कर्नर विजयी
हेर्नुहोस् केही रोमान्चक जोगाडु तस्विर, जुन निकै अचम्म लाग्दा छन्
‘भिजिट नेपाल २०२०’ लाई सहयोग पुर्याउन पलेटिज् होलिडेले पर्यटन क्षेत्रका ६ महिलालाई सम्मान गर्ने
ढोरपाटनमा यातायात अवरुद्ध
बुढानिलकण्ठ मन्दिर भित्र अहिलेसम्म कुनै राजाले प्रवेश गर्ने हिम्मत किन गरेनन् ? यस्तो छ कारण
कति वर्ष पुरानो हो फेवाताल विचको ‘तालबाराही’ मन्दिर, तपाईलाई थाहा छ ? यस्तो छ उत्पतिको कथा र धार्मिक महत्व!
पाकिस्तानमा अविरल वर्षाबाट २८ को मृत्यु
‘मेलम्चीको पानी छिट्टै ल्याउन विकल्पसहित तयारी’
ऊर्जा क्षेत्रमा ७० अर्ब लगानी हुँदै, ११ उद्योग दर्ता